I-Apple ikhupha i-WatchOS 3.2.2 Hlaziya ngokulungiswa kwe-Bug kunye noPhuculo lweNtsebenzo | Ndisuka mac
Ngale njikalanga iApple ikhupha uhlaziyo kwiimveliso zayo eziphambili. Izinga lokubheja lonyukile kwiiveki ezidlulileyo, ukusuka kwiveki ezimbini ukuya kwenye ngeveki. Kule veki iphelileyo imeko yehlile, oko kuthetha ukuba uhlaziyo lulungele ukwenziwa kwiWWDC elandelayo.
Akukho nto inokuthi iqhubeke nenyaniso, ngale mvakwemini, kunye nohlaziyo oluthe kratya, inguqulelo 3.2.2 yewotsOS yakhutshwa. Ekuqaleni, Olu hlaziyo lilinganiselwe ukulungiswa kwe-bug kunye nokuphuculwa kokusebenza kwesoftware ngokubanzi. Khumbula ukuba inguqulelo 3.2 yamkelwe ngeendaba ezimnandi, ezinje nge Imo yemidlalo yeqonga, esivumela ukuba sibone usetyenziso olunemvelaphi emnyama emnyama okanye Sirikit yezicelo. Inguqulelo 3.2. Ukongeza kutshintsho kwisoftware, izise imibala emitsha kubuso bewotshi. Ukuba silufumene naluphi na utshintsho olubalulekileyo, siza kukuxelela ngalo kweli phepha.
Ngesoftware ecoliweyo, sinomdla wokubona ukuba ngaba abafana base-Apple basilungiselele ntoni na kwi-WWDC, apho siza kuthi sazi ngokucacileyo iinkcukacha ze I-WatchOS 4.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ikhupha uhlaziyo lwe-watchOS 3.2.2 ngokulungiswa kwe-bug kunye nophuculo lwentsebenzo
UOmar Ortiz Garcia sitsho
Amarhe okuba iApple iya kuthi ityhile i-watchOS 4 yeApple Watch eWWDC ukukhaba ngoJuni 5, yintoni eyinyani koku!
Phendula uOmar Ortiz Garcia
Omar OrtizEsUnPendejo sitsho
I-WatchOS ihlala ityhilwa kwi-WWDC, iya kuba ngamarhe kodwa yinto eyenzeka rhoqo, ngaphambi kokuba uphawule, zazise.
Phendula uOmar OrtizEsUnPendejo
Iwijethi yemozulu: Uqikelelo kwidesktop yakho, luza Ivenkile yeeVenkile zeMac